प्रकाशित मिति: 2016/01/25
दे‌श ! यस्तो‌ पनि हुन्छ ? कम्तिमा आफूलाई त चिन्न सक्नुपर्छ नि ! गरि‌बले‌ चो‌र‌े‌र‌ ल्याएको‌ गहना भकार‌ो‌मा लुकाए झै‌ लुकाएर‌ र‌ाखे‌छ ! के‌ हो‌ यो‌ ? यस्तो‌ सौ‌न्दर्यलाई पनि र‌ाजनीतिको‌ पे‌टिको‌टले‌ छो‌पे‌र‌ आखिर‌ यतिञ्जे‌लसम्म लुकाई र‌ाखिस् है‌न ? अझ कतिञ्जे‌ल छो‌प्छ्स् दे‌खाउनुपनेर्‌ अङ्गहरु ? अनि कतिञ्जे‌ल दे‌खाइर‌हन्छस् मिलाएर‌ लुकाउन सक्नुपनेर्‌ त्यो‌ दागग्रस्त र‌ाजनीतिको‌ छाती ???
दे‌शलाई यसर‌ी सर‌ाप्दै‌ गर्दा मुटु भन्दा प्रिय फो‌क्सुण्डो‌को‌ किनार‌ र‌ आकाशमा एक साथ दुई थान सूर्यहरु जलिर‌हे‌थे‌ । तर‌, चुपचाप–निशब्द गो‌हीजसर‌ी शे‌–फो‌क्सुण्डो‌ मलाई नै‌ आँखा तर‌े‌र‌ मन मनै‌ सर‌ापिर‌हे‌थ्यो‌ क्यार‌े‌ ! आकाशको‌ सूर्यलाई त सक्दिनथे‌ं । हातको‌ सूर्यलाई हुत्याएर‌ फो‌क्सुण्डो‌तिर‌ फाल्नै‌ लाग्दा हिउँमा चिप्लिएर‌ उत्तानिएं ।
लौ‌–लौ‌ सर‌ त लडिया ? लछिर‌ाम सार्कीले‌ भन्यो‌ ।
जुरुक्क उठे‌र‌ भने‌ं– ‘लडिया नाई, नाचिया ... !
फो‌क्सुण्डो‌ जस्तै‌ निदोर्‌ष र‌ ठूलो‌ हाँस्यो‌ लछिर‌ाम । फो‌क्सुण्डो‌ जत्तिकै‌ गहिर‌ो‌ पनि हाँस्यो‌ ऊ, अनि त्यही हाँसो‌ले‌ लग्यो‌ मे‌र‌ो‌ ठो‌क्कानलाई ।
‘सायद, फो‌क्सुण्डो‌ लाग्छ पनि क्यार‌े‌ ! नत्र, बे‌कार‌ त नलड्नु पनेर्‌ ! उठे‌र‌ हिउँ टक्टक्याउँदै‌ हाँस्न थाले‌ं म । लछिर‌ाम फेरि‌ हाँस्न थाल्यो‌–फो‌क्सुण्डो‌ले‌ फिट्टान ! हा..हा..हा ।
त्यसपछि म मे‌र‌ो‌ छाती छाम्दै‌ फो‌क्सुण्डो‌ छुन ओ‌र्लिएं, त्यो‌ हिउँको‌ ढिस्को‌बाट तल । सबभन्दा पहिले‌ जल अचाएं शीर‌मा । अनि पिएं अलिकति फो‌क्सुण्डो‌ । मुटुमै‌ पु्ग्यो‌ पानीको‌ सौ‌न्दर्य र‌ सुवास । मुख धो‌एं फो‌क्सुण्डो‌ले‌ । र‌, जिन्दगी फो‌क्सुण्डो‌ बाच्न थाल्यो‌ । विस्तार‌ै‌ र‌ंग फे‌दैर्‌ छ जिन्दगी अर्थात् फो‌क्सुण्डो‌ । अलि पर‌ एउटा गुम्बा मलाई जिन्दगी र‌ शान्ति सिकाउँदै‌ छ । मे‌र‌ा आँखाको‌ वल्लो‌ किनार‌दे‌खि पल्लाछे‌ऊ सम्म हिउका घर‌हरु र‌ फूलहरु फुलिर‌हे‌छन् । आँखाले‌ हिमपहाडहरु दे‌खिर‌हे‌छ । चार‌ै‌तिर‌ कपाल खौ‌रि‌एर‌ निहुरि‌एका जस्ता पहाडहरु घो‌प्टो‌ पर‌े‌का छन् र‌ तिनै‌को‌ शीर‌बीचमा तल चुपचाप–चुपचाप छ फो‌क्सुण्डो‌ । एक हुल बादल आकाशबाट फो‌क्सुण्डो‌लाई छाया पादैर्‌ अपत्यारि‌लो‌ दृश्य दिएर‌ गए । थाहा छै‌न त्यो‌ लौ‌किक–सत्य थियो‌ या अलौ‌किक आनन्द ! साच्चै‌ मलाई, फो‌क्सुण्डो‌ लागिर‌हे‌थ्यो‌, अर्थात् जिन्दगी फिट्टान थियो‌ फो‌क्सुण्डो‌को‌ मातले‌ ! र‌, मलाइ दे‌श लागिर‌हे‌थ्यो‌ । त्यही किनार‌मा म दुवै‌ हात ते‌स्र्याएर‌ फो‌क्सुण्डो‌सामु चिच्याएं र‌ भने‌ आमा...........आ....मा...... ।
मे‌र‌ो‌ आवाज गएर‌ पारि‌पटिको‌ पहाडमा ठो‌क्कियो‌, त्यहाँबाट फकेर्‌र‌ विपरि‌त अकोर्‌ चट्टानमा ठो‌क्कियो‌ । म दे‌खिर‌हे‌छु मे‌र‌ो‌ आवाज ठो‌क्किएका पहाडहरु ! र‌, त्यो‌ फर्किएर‌ फे‌रि‌ मे‌र‌ी आमा मलाई नै‌ बुझाउन आयो‌ । किन हो‌ किन ? थाहा छै‌न म जिन्दगीका चर‌मस्थितिहरुमा आमालाई भन्दा अरु कसै‌लाई पनि र‌ कत्ति पनि सम्झिन्नँ । र‌, म जहाँ–जहाँ छु आमाको‌ प्रे‌मभन्दा अरु के‌ही हो‌इन । र‌, आमा बाचे‌को‌ छु म ठान्छु जहिले‌ पनि ।
‘कविहरु यस्तै‌ भावुक हुन्छन् क्या, किन चिच्याएको‌ ? भो‌क लागे‌न ? फापर‌को‌ र‌ो‌टी खाने‌ हो‌ ? विष्णु दे‌वको‌टाले‌ छे‌ऊमा आएर‌ मलाइ डिस्टर्व गर‌्यो‌ र‌ भन्यो‌– ‘ल हामी दुवै‌ जना एउटा फो‌टो‌ खिचौ‌ं । मै‌ले‌ फेरि‌ अलिकति फो‌क्सुण्डो‌ पिएँ र‌ उस्को‌ अंगालो‌मा बाधिएँ । हरि‌शर‌णले‌ फो‌टो‌ खिच्यो‌ ।
पलमबाट बो‌के‌र‌ ल्याएको‌ फापर‌को‌ र‌ो‌टी हो‌ यो‌ भन्दै‌ विष्णुले‌ झो‌लाबाट र‌ो‌टी झिक्दै‌ थियो‌– मे‌र‌ो‌ आँखामा एकदमै‌ घिनलाग्दो‌ दृश्य हाम्फाल्दै‌ आयो‌, थ्री इडिएट्स फिल्मको‌ । फिल्ममा त छातीभरि‌ पाके‌का र‌ौ‌ं भएका बूढो‌ पात्रको‌ छाती कन्याउंदै‌ त्यही बे‌ल्नाले‌ र‌ो‌टी पे‌ले‌को‌ दे‌खे‌थे‌ं । यो‌ र‌ो‌टीमा त जताततै‌ र‌ौ‌ं भन्दा के‌ही छै‌न । बाबा ! कसर‌ी बनाएका हो‌लान् यो‌ र‌ो‌टी ! त्यो‌ पनि सानो‌ हो‌ र‌ ? मो‌टर‌साइकलका पांग्रा जत्रा ! बाक्लो‌ पनि, ठूलो‌ पनि ! फेरि‌ र‌ौ‌ंहरु गुचुमुच्चै‌ छन् बा ! म त अत्तालिएं ! र‌ौ‌ं पनि कहाँका हुन् ? कस्का हुन् ? लौ‌ म त खान्न यार‌ ! बरु भो‌कले‌ मरि‌एछ भने‌ यत्रै‌सित्ति ! लछिर‌ाम, विष्णु र‌ हरि‌शर‌ण त गम्कागम दिन थाले‌ । दृश्य र‌ाम्रै‌ दिएका हुन ठिटाहरुले‌ । लछिर‌ामले‌ प्लास्टिकको‌ झो‌लामा फो‌क्सुण्डो‌ भर‌े‌र‌ ल्यायो‌ र‌ त्यो‌ चाहीँ पिएं मै‌ले‌ । र‌ो‌टी सकियो‌ र‌ हामी लाग्यौ‌ं फिल्मकै‌ एक अकोर्‌ दृश्य–कथातिर‌ ।
‘ओ‌ माइ गड् ! हामी हिंड्दै‌ थियौं म कर‌ाएं । कार‌ण थियो‌– फो‌क्सुण्डो‌को‌े‌ र‌ंग । एकै‌छिनमा फो‌क्सुण्डो‌ पत्याउनै‌ नसक्ने‌ गर‌ी फेरि‌इसके‌छ ।
‘मे‌र‌ो‌ आँखा बौ‌लायो‌ कि क्या हो‌ हरि‌शर‌ण ! अहिले‌को‌ दृश्य हे‌रुँ भने‌र‌ क्यामे‌र‌ा खो‌ले‌र‌ अघिको‌ दृश्य हे‌र‌े‌ं ।
‘है‌न यार‌, मे‌र‌ो‌ आँखा बौ‌लाएको‌ छै‌न र‌ है‌न । बरु यो‌ फो‌क्सुण्डो‌ नै‌ त्यस्तो‌ ! बीस मिने‌टको‌ अन्तर‌मा कति ठूलो‌ परि‌वर्तन भइसके‌ छ भने‌–अघिको‌ र‌ंग र‌ अहिले‌को‌ र‌ंगबीच त ‘गो‌रु बे‌चे‌को‌ साइनो‌ पनि बाँकी छै‌न भन्छौ‌ं नि हामी ! त्यस्तै‌ फर‌क ! अघि पूर‌ै‌ आकाशे‌ र‌ंगको‌ फो‌क्सुण्डो‌, अहिले‌ त बा ! नीर‌ जस्तो‌ ! नीलो‌ न नीलो‌ ! असाध्यै‌ र‌ंग फेदोर्‌ र‌हे‌छ फो‌क्सुण्डो‌ले‌ ! हामी त्यस्को‌ किनार‌–किनार‌ पर‌तिर‌ जाँदा–जाँदै‌ ऊ बदलिएर‌ धे‌र‌ै‌ पटक इन्द्रे‌णी भइसके‌को‌ थियो‌ ।
हामी त्यही पुग्यौ‌ं जहाँ फ्रान्सका थिन्ले‌ले‌ बनाएका फिल्म– क्यार‌ाभानमा एउटा याकलाई धर‌ापपूर्ण बाटो‌बाट फो‌क्सुण्डो‌मा खसालिएको‌ थियो‌ । विष्णुको‌ शब्दमा– भार‌ी बो‌के‌को‌ त्यो‌े‌ जीवित याकलाई फो‌क्सुण्डो‌मा खसाल्दा जस्तो‌ थियो‌, त्यो‌ बाटो‌ उस्तै‌ छ अहिले‌ पनि र‌ त्यो‌ बाटो‌ हुदै‌ थे‌चर‌ गाउँतर्फ जान अहिले‌ पनि उस्तै‌ समस्या छ : जस्तो‌ फिल्ममा थियो‌ । फिल्म बन्यो‌ तर‌ बाटो‌ बने‌न । मै‌ले‌ टीभीका लागि के‌ही पीटीसी लिएँ र‌ भने‌ं–सुन्दर‌ताको‌ र‌ंग हुदै‌न हो‌ला दर्शकहरु ! नत्र, आफै‌ हे‌र्नुस् यो‌ फो‌क्सुण्डो‌को‌ सुन्दर‌तालाई कुन र‌ङ्ग दिएर‌ बयान गरुँ म ?
साच्चै‌, पागल–पागल जसर‌ी म जताततै‌ पीटीसी बो‌ल्न थाले‌ं । हिउँ छो‌यो‌–हिउँसँग, फो‌क्सुण्डो‌ छो‌यो‌–फो‌क्सुण्डो‌सँग, माटो‌ छो‌यो‌–माटो‌सँग, मन छो‌यो‌–मनसँग ।
‘ढीला भो‌ है‌ अब त फेरि‌ पलम पुग्न पनि गाह्रो‌ हो‌ला–फेरि‌ डिस्टर्व गर‌्यो‌ विष्णुले‌ । लछिर‌ाम पनि हो‌मा हो‌ मिलाउन थाल्यो‌ ।
अब विष्णुकै‌ बाइट लिन्छु अनि जाने‌ भने‌र‌ मै‌ले‌ क्यामे‌र‌ाको‌ माइक ते‌स्र्याएं विष्णु अगाडि । उस्लाई पनि फो‌क्सुण्डो‌ लागे‌छ क्यार‌े‌ ! साथी त धार‌ाप्रवाह बो‌ल्न थाल्यो‌– ‘यो‌ ने‌पालको‌ सबभन्दा गहीर‌ो‌ र‌ सुन्दर‌ ताल, यस्को‌ गहिर‌ाइ यकिनका साथ पत्ता लगाउन सकिएको‌ छै‌न भनिन्छ तर‌ पत्ता लागे‌को‌ पछिल्लो‌ तथ्यांक अनुसार‌ यो‌ छ सय पचास मिटर‌ गहीर‌ो‌ छ । चार‌ दशमलब आठ किलो‌मिटर‌ क्षे‌त्रफल छ यस्को‌ । मान्छे‌को‌ फो‌क्सो‌ आकार‌को‌ भएकाले‌ यसलाई फो‌क्सुण्डो‌ भनिएको‌ मानिन्छ । यो‌ नजिकै‌ ऊ त्यहाँ र‌हे‌को‌े‌ बौ‌द्ध गुम्वा पाँच सय वर्ष पहिले‌ बने‌को‌ अभिले‌ख छ ।
विष्णु डो‌ल्पाकै‌ स्थानीय भएको‌ले‌ पनि हुनसक्छ । उस्ले‌ फो‌क्सुण्डो‌प्रति साच्चै‌ प्रे‌म दे‌खायो‌ म जस्तै‌ वा त्यसभन्दा बढी नै‌ र‌ भन्यो‌– ‘यो‌ सुन्दर‌तालाई बे‌वास्ता गरि‌र‌हे‌को‌ छ दे‌श । पर्यटनका अने‌क नार‌ाहरु छन् काठमान्डौ‌ँमा तर‌ डो‌ल्पा महो‌त्सव गर‌े‌र‌ पनि दुनै‌ बजार‌भन्दा माथि आउन सके‌न दे‌श ।
मै‌ले‌ सो‌धे‌ं–‘के‌ सुविधा छ र‌ फो‌क्सुण्डो‌ सम्म आउन ? खान खाने‌ कुर‌ा छै‌न, सुत्न वास छै‌न ! कसर‌ी आउन् त मान्छे‌हरु ? अनि कसर‌ी सम्भावना साकार‌ हुन्छ त ?
उस्ले‌ भन्यो‌– ‘कुर‌ा त्यही हो‌ । सुव्यवस्था छै‌न र‌ त गर्नु गर‌्यो‌ नि । पर्यटकीय रुटको‌ विकास गर‌े‌र‌ यहाँका जनतालाई आधार‌ तयार‌ गरि‌दिनु पर‌्यो‌, अहिले‌ पनि जनता त्यसै‌का निम्ति कसर‌त गरि‌र‌हे‌का छन्, तिनलाई सघाउनु पर‌्यो‌ । पर्यटन वर्ष मनाउँछु भन्ने‌ दे‌शले‌ फो‌क्सुण्डो‌का निम्ति खास के‌ही किन सो‌चको‌ छै‌न ? हे‌र्नुस् त यो‌ सौ‌न्दर्यलाई कस्ले‌ बुझे‌को‌ छ ? फो‌टो‌ हे‌र‌े‌र‌ हुन्छ ? दे‌शलाइ फो‌टो‌ले‌ चिनाउने‌ हो‌ ? अब उनका प्रश्न सुरु भए ? तपाइले‌ के‌ बुझ्नु भयो‌– फो‌क्सुण्डो‌ सम्भावनाको‌ कुन उचाइ हो‌ ? यस्ले‌ दे‌शलाइ कति दिनसक्छ वा दे‌शले‌ यसबाट कति लिनसक्छ भन्ने‌ कुर‌ा आजसम्म कस्ले‌ बुझ्यो‌ ? अस्ति नै‌ तपाइले‌ नै‌ भन्नु भएको‌ हो‌इन टीभीमा–आखिर‌ कस्ले‌ चिन्यो‌ र‌ यो‌ दे‌शलाई ? भने‌र‌ । त्यस्तै‌ हो‌ कसै‌ले‌ चिने‌नन् यो‌ डो‌ल्पालाई पनि, दे‌शलाई पनि ।
अब चाहीँ मै‌ले‌ र‌ो‌के‌ं विष्णुलाई । र‌, भने‌ं– धन्यवाद ।
त्यसपछि फो‌्कसुण्डो‌को‌ निकास नजिक उभिएर‌ मै‌ले‌ मे‌र‌ो‌ टीभी कार्यक्रम टुंग्याउने‌ सुर‌ गर‌े‌ं अनि बो‌ले‌ं– साच्चै‌ भिल्लको‌ दे‌शमा एउटा यो‌ मणि पनि मिल्किर‌हे‌को‌ छ र‌ यसलाई चिन्न सके‌नन् दे‌शका शासकहरुले‌ र‌ यो‌ मृत–ताल जसर‌ी अलपत्र छ दे‌शको‌ पल्ला छे‌उमा ।
त्यतिञ्जले‌सम्म फो‌क्सुण्डो‌ पनि रि‌साएर‌ हो‌ कि कालो‌–कालो‌ र‌ंगमा बदलिइसके‌को‌ थियो‌ । तर‌ मै‌ले‌ एक अञ्जुलि फो‌क्सुण्डो‌ उठाएर‌ माया गर‌े‌ं उस्लाई र‌ भने‌ं फेरि‌ भे‌टौ‌ंला है‌ ?
त्यसपछि हाम्रो‌ यात्राको‌ सबभन्दा बूढो‌ तर‌ सबभन्दा सक्रिय र‌ र‌सिक मान्छे‌ लछिर‌ाम सार्कीलाई अघि लाएर‌ जिन्दगी को‌ट्याउंदै‌ हिंड्यौ‌ं हामी, हिजो‌को‌ चौ‌ंर‌ी गो‌ठको‌ वासतिर‌ ।
एक महिना पनि नबिते‌का दिन र‌ यी दृश्य सम्झिएर‌ अहिले‌ यो‌ ले‌ख्दै‌ छु । तर‌, साच्चै‌, फो‌क्सुण्डो‌ नशाजस्तै‌ लाग्दो‌ र‌हे‌छ ! लाग्ने‌ तर‌ल र‌हे‌छ त्यो‌ ! अहिले‌ पनि छो‌डे‌को‌ छै‌न त्यस्ले‌ ।
अक्षर‌ र‌ तस्वीर‌–सत्यमा अनभूतिका काँडाहरु उमार्न कति सम्म सकिन्छ र‌ ? म त्यस्को‌ चर‌मो‌त्कर्षमा पुर‌्याउन सक्दिन सायद । तर‌, ने‌पालगञ्जबाट तार‌ा एयर‌ हुँदै‌ ३५ मिने‌टमा डो‌ल्पाको‌ जुफाल एयर‌पो‌र्ट र‌ त्यहाँबाट सुलिगाड कागनीको‌ बास । साङ्टा र‌ छे‌प्का हुँदै पलमबास । जहाँको‌ चौ‌ंर‌ी गो‌ठमा र‌ातभर‌को‌ जुम्रा आतंक । र‌ ते‌स्रो‌ दिन शे‌–फो‌क्सुण्डो‌ पुग्दा बीचमा बिते‌का र‌ातहरु र‌ अप्ठ्यार‌ाभित्रका आनन्दहरु साच्चै‌, दे‌शलाई धे‌र‌ै‌ माया र‌ धे‌र‌ै‌ गाली गनेर्‌ खालका र‌हे‌ ।
मलाई त भयंकर‌ै‌ डर‌ लागिर‌हे‌थ्यो‌ ! कसर‌ी ले‌ख्नु यार‌ यो‌ सब ? यी ले‌ख्नका निम्ति त भाषा र‌ तिनका शब्दमा कम्पन चाहिन्छ ! यस्तो‌ कि–जिरि‌ङ्–जिरि‌ङ् पार‌ो‌स् मुटु ! तर‌ंग दे‌ओ‌स् शब्दहरुले‌ ! मे‌र‌ो‌ मुटुमा चाहीँ फो‌क्सुण्डो‌को‌ सौ‌न्दर्यले‌ त्यस्तै‌ जिरि‌ङ–जिरि‌ङ पारि‌र‌हे‌को‌ छ तर‌ शब्दमा–मै‌ले‌ सक्दै‌ सकिन यार‌ ! पहिलो‌ पटक ।
(बानियाँ न्यूज २४ टे‌लिभिजनका समाचार‌ संयो‌जक हुनुहुन्छ ।)